बालुवा सिमेन्ट बोक्ने सुन्दरी बहिनिको स्वरले रु'वायो आज ! १२ घण्टा लेबर काम गरेर गायिका बन्ने सपना (भिडियो हेर्नुहोस् र धेरै सेयर गरि सहयोग गर्नुहोला) -
Home Entertainment बालुवा सिमेन्ट बोक्ने सुन्दरी बहिनिको स्वरले रु’वायो आज ! १२ घण्टा लेबर...
बालुवा सिमेन्ट बोक्ने सुन्दरी बहिनिको स्वरले रु’वायो आज ! १२ घण्टा लेबर काम गरेर गायिका बन्ने सपना (भिडियो हेर्नुहोस् र धेरै सेयर गरि सहयोग गर्नुहोला)
बालुवा सिमेन्ट बोक्ने सुन्दरी बहिनिको स्वरले रु’वायो आज ! १२ घण्टा लेबर काम गरेर गायिका बन्ने सपना
सफलता मुल मन्त्र । आफ्नो लक्ष्य तिर बढ्दै गर्दा, एक व्यक्ति धेरै पटक आफ्नो विवेक प्रयोग नगरी अरूको शब्दहरुमा अधिक ध्यान दिन सुरु गर्दछ। व्यक्तिको यो बानीले उसलाई सफलताको मार्गबाट पछाडि धकेल्नेछ र असफलताको अनुहार हेर्न बाध्य पार्छ। आउनुहोस् हामी यो सत्यताबाट सफलता प्राप्तिका लागि जरुरी मुल मन्त्र जानौँ ।
१, आजका जताततै नकारात्मकताको वातावरण छ । तपाईंको उदेश्यतर्फ जब तपाईं अगाडि बढ्नुहुन्छ, सबै व्यक्ति तपाईसँग सबै प्रकारका कुरा गर्नेछन्। त्यहाँ धेरै खुट्टा तान्ने कोसिस हुनेछन् । तर तपाईले अरूको नकरात्मक चीजहरूलाई बाइपास गरेर सफलताको यात्रामा निरन्तर अगाडी बढ्नु पर्छ।
२, आवश्यकता यो हो कि हामीले हामीलाई कमजोर बनाउने प्रत्येक आवाजलाई बेवास्ता गर्नुपर्दछ। यसमा ध्यान दिनुको सट्टा तपाईको लक्ष्यतर्फ अघि बढ्नुहोस्। अनि मात्र सफलता चुम्नेछ ।
Previous articleभर्खरै खुल्लामंचमा भोका जनता र प्रहरी बीच झ’ डप ! प्रहरीले गाडीमा कोचेर खोलामा लगे पछि रि’सले आगो
Next articleयो कस्तो ब्रज* पात: मु’टु द’रो गरेर हेर्नुस – आमा र बैनीको अकालमै मृ’ त्युपछी भाईको यस्तो हा’ लत, रुदा रुदै (सके सहयोग गरौ कि सेयर गराै)